Creative Writing » မြေပဲယိုလေး တကိုက်နှစ်ကိုက် (၅) – စီးတော်ယာဉ် Bus ကား	8
Posted by padonmar on Jun 3, 2016 in Creative Writing, My Dear Diary, Society & Lifestyle, Travel | 8 comments
-ဘတ်စကားပေါ် တက်တက်ချင်း သတိထားမိတာကတော့ အသက်ကြီးသူတွေ၊ မသန်စွမ်းတွေ၊ ကလေးအမေတွေ အတွက် ၀င်ဝင်ချင်းအနိမ့်ပြင်ညီမှာ ဆိုဖာ အနီတွေ ထားပေးတာပါပဲ။ငယ်ရွယ်သူ သန်စွမ်းသူတွေကတော့ နောက်ဖက်အမြင့်က ခုံတွေမှာ သွားထိုင်ကြပါတယ်။
မတ်တပ်ရပ်စီးရသူတွေအတွက် လက်ကိုင်ကွင်းတွေကလည်း စီရီနေပါတယ်။ရွှေပြည်ကြီးရဲ့ ဘတ်စကားအမြင့်ကြီးတွေပေါ် ကျမတို့လို မပုတုတွေ တက်မိလို့ ကားဆောင့်ထွက်လိုက်ရင် ကားဘေးနံရံကို ပြေးလက်ထောက်ရတာနဲ့၊ သူများထိုင်ခုံနောက်က လက်ကိုင်ကို ပြေးကိုင်ရတာနဲ့ ကိုယ့်မှာ ခါးဖက်ထားစရာ ရှာမထားမိတဲ့ အဖြစ်ကို နာကျည်းအောင် လုပ်ကြပါတယ်။ရှိပြန်ရင်လည်း တခါတလေ လက်ကိုင်ကွင်း တခုကို လက် ၃ချောင်းလောက် လုကိုင်ရပါတယ်။တကယ်တော့ လက်ကိုင်ကွင်းလေးတွေနဲ့ ကုန်ပစ္စည်း ကြော်ငြာခွင့်ပေးထားရင် မပုတုလေးတွေက ကျေးဇူးတင်ပြီး ၀ယ်သုံးကြမှာပါ။(တခါကတော့ ကြော်ငြာ လက်ကိုင်ကွင်းတွေ တွေ့ခဲ့မိပါတယ်။ဘယ်အချိန်က ပျောက်သွားပြီး ဆက်မလုပ်ကြတော့လည်း မသိပါဘူး)
ဂျစ်စူ says: များဒို့ဆီမလဲ မကြာမီ တစ်နေ့ ဖြစ်လာတော့မည်လို့
kai says: .. စီးမယ်တွေးထားခဲ့တာ…. အချိန်မရခဲ့သမို့..ရန်ကုန်ဘတ်စ်တောင်မစီးလိုက်ရဘူး..။
တက်စ်စီတွေ.. လမ်းလျှောက်နေသူတွေ.. လမ်းဘေးဈေးသည်တွေအပြုမအမူ.. စရိုက်တွေကနေ… ရသလောက်ဖမ်းမှန်းကြည့်ရရင်တော့…. ထိုင်ဝမ်ကဘတ်စ်တွေလိုဖြစ်ဖို့.. လက်၁၀ချောင်းနဲ့.. တခါ.. ၂ခါ.. ၃ခါ.. အနည်းဆုံးလိုဦးမယ်..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12200
Thint Aye Yeik says: .ရွှေပြည်တော်ရယ် မျှော်နေလည်း ဝေးးးးးးးး
ခင်ဇော် says: အဲလို အစဉ်ပြေတာတွေကြောင့် အလုပ်လုပ်ရတာ အလုပ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပရက်ရှာပဲ ရှိတယ်။
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: .ကောင်းပါလေ့…အဲ့လိုနေ့ရောက်မှာကိုမျှော်နေပါတယ်
ခင်ခ says: အရင်က သူများနိုင်ငံရောက်ရင် အားကျတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်။
အောင် မိုးသူ says: စင်ကာပူမှာလည်း အဲ့လိုပဲနော်။ နှစ်ထပ်ဘတ်စ်ကားစီးရတာ သဘောအကျဆုံးပဲ။
လုံမလေးမွန်မွန် says: ဟုတ်တယ် အန်တီရယ်… သူများနိုင်ငံတွေက public transport ကို သိပ်အားကျတာ… တစ်ခါတစ်ခါ စဉ်းစားမိတယ်… (နိုင်ငံအပေါ် စေတနာမရှိတဲ့အကြောင်း မသိခင်ကပေါ့) ငါတို့နိုင်ငံက လူကြီးမင်းများ နိုင်ငံခြားကို လေ့လာရေးခရီးတွေသွားကြတာ.. ဘာမှသိမလာကြတာ.. အံ့သြစရာကြီး.. အဲဒီလောက် ပိန်းရသလားလို့ပေါ့.. ဝေးဝေးမကြည့်ဘူး.. ဘန်ကောက်မှာဆိုလည်း ကားအရမ်းပိတ်တယ်.. ဒါပေမယ့် sky train က အရမ်းအဆင်ပြေတယ်.. လမ်းလျှောက်ချင်ရင်လည်း sky walk တွေကနေ အန္တရာယ်ကင်းကင်း လျှောက်လို့ရတယ်.. ကားမစီးချင်လို့ လမ်းလျှောက်တာတွေ.. စက်ဘီးစီးတာတွေကို အန္တရာယ်ကင်းကင်း လုပ်လို့ရရင်ကို ကားကျပ်တာတွေ အတော်လျှော့သွားမယ် ထင်တယ်… နောက် ဆရာတစ်ယောက်က ပြောဖူးတယ်.. နိုင်ငံခြားမှာဆို လူငယ်တွေက သိပ်ကြိုးစားကြတာတဲ့.. လမ်းသွားရင်..ကားစီးရင်တောင် အင်္ဂလိပ်စာအုပ်တွေဖတ်.. အင်္ဂလိပ်စာတွေနားထောင်နဲ့.. အချိန်ကို အကျိုးရှိရှိသုံးကြတယ်တဲ့.. ကိုယ်တိုင်လည်း ကြိုးစားကြည့်ဖူးပါရဲ့.. ဆူညံပွက်လောက်ရိုက်နေတဲ့လမ်းမှာ.. ကားလမ်းပေါ်တက်လျှောက်ရတဲ့အဖြစ်.. မတ်တပ်ရပ်မပြောနဲ့.. ထိုင်စီးရင်တောင် ဘာသံမှ နားထဲမဝင်နိုင်လောက်အောင် ဆူညံနေတဲ့ဘတ်စ်ကား.. စာဖတ်ပြီး စာနားထောင်ဖို့မပြောနဲ့.. အသက်ကိုဖက်နဲ့ထုပ်ထားရတာဆိုတော့… ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူး… ခုတော့ ရောင်နီလေးမြင်နေရပြီလေ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.